Yisona Isikhathi Esifanele Sokuthi Ukuthola I-Malware - Iseluleko se-Semalt
Noma yikuphi umsebenzisi wekhompuyutha angawa isisulu sezindlela eziningi ezisetshenziswa umculi wokuhlambalaza ukufaka i-malware namagciwane kumakhompyutha abo. Ukuxhuma ikhompyutha ku-intanethi uma isofthiwe yokuphepha enganele iveza umsebenzisi ezinsongweni ezihlukahlukene zokuphepha. Ukuchofoza okukodwa kusixhumanisi esolisayo noma izikhangisi ezi-pop-up kungalanda i-malware namagciwane kwikhompyutha ukuze kubangele ukulimala okubi njengoba abaduni bangasebenzisa ithuba lokuqapha ukungena nokuhlasela imininingwane yokuphepha yomsebenzisi ukusiza ukwebiwa kobunikazi, ukuxhunywa nokuningi nezinye izinto ezilimazayo.
Lesi sihloko esibhalwe uMax Bell, iMenenja ye-10 (Semalt Impumelelo yoMthengi, inikeza izincomo zokuvikela ezilula eziphathelene nokulanda i-malware, iTrojan, nezinye izifo.
Gcina isofthiwe yokuphepha ibuyekezwe
Ikhompiyutha kufanele ibe nesofthiwe ye-antivirus evuselelwe njalo. I-anti-spyware esebenzayo kanye nesofthiwe ye-antivirus ingenza kube lula ukuqapha imisebenzi yekhompiyutha ukuvikela malware namagciwane. Ukucushwa okufanele kwe-firewall okuhambisana nokuvuselelwa okuzenzakalelayo kwesistimu yokuphepha kungaqinisekisa ukuphepha ngokumelene neTrojan.
Thayipha i-URL kuma-Browsers Esikhundleni sezixhumanisi ezihlinzekiwe
Ukuchofoza kusixhumanisi okwabiwe kwi-imeyili kuyinqamuleli kwi-intanethi, kodwa kungabonisa umsebenzisi iTrojan ne-malware. Abahlaseli bangakwazi ukwabelana ngezixhumanisi ezibonakalayo ezinembile ngokusebenzisa ama-imeyili lapho uchofoza khona ukuxhumeka kwe-malware namagciwane okusetshenziselwa ukweba ulwazi lomuntu siqu ukuziphatha kabi. Ukuthayipha izixhumanisi ngokuqondile kusiphequluli kunikeza okunye okuphephile kwisiphequluli.
Ungavuli Amafayela Asolisayo
Ngaphandle kokuthi umthumeli wokunamathiselwe kwe-imeyili azijwayele, akukhuthazwa ukuwavula. Abakwa-Scam abaculi bangasebenzisa okunamathiselwe kwi-imeyili ekusakazeni i-malware namagciwane..Hlola kabili ikheli lomthumeli noma uskena okunamathiselweyo usebenzisa isofthiwe yokuphepha.
Sebenzisa Amawebhusayithi Athembekile Ukulayisha Nokufaka I-Software
Amageyimu wamahhala, ama-movie nama-software okulandwayo angazwakala emuhle kuningi kodwa angabangela umonakalo omkhulu. Amakhodi e-Malware ne-virus aqondisa abasebenzisi abangenacala bekhompyutha abalandela ukukholelwa kwabo ukuze benze lula ukukhwabanisa. Ukulanda kusuka kumawebhusayithi angaphiliwe angafaka i-malware engaziwa kukhompyutha. Yenza konke okulandwayo kumasayithi athembekile kuphela.
Lungisa 'Ukushayela ngeDrayivu-by' kuya ku-Minimum
Setha ukuphepha kwesiphequluli ukuthola noma yikuphi ukulandwa okungagunyaziwe. Izilungiselelo zokuphepha eziphakathi kwe-Internet Explorer zingakwazi ukubona nokuvimbela okulandwayo ngokungemthetho ukuqinisekisa ukuphepha okumelene ne-malware namagciwane.
Sebenzisa ama-Pop-up Blockers
Ukuchofoza ku-pop-up noma izixhumanisi ku-pop-up ebonakala kuwebhusayithi ingafaka iThrojani kanye namanye amagciwane kukhompyutha. Vala ama-pop-ups noma ufake ama-block-up blockers ukuze akwenzele umsebenzi.
Ungathengi Isofthiwe eyabelwe ku-imeyili noma imilayezo
Ukuphendula ama-imeyli okungahleliwe noma imilayezo ebiza ukufaka isofthiwe ingaphazamisa uhlelo nge-malware namagciwane. Ngokuchofoza izixhumanisi ezinikeziwe, i-Trojan ingafaka ukulimaza.
Khuluma ngoKhuseleko lwekhompyutha
Ukukwabelana ngokukhathazeka kokuphepha kubantakwethu kanye nabantu abasha kuma-malware ne-virusi e-inthanethi bawazisa. Bangakwazi ukugwema izimpumputhe emva kwezixhumanisi eziphakamisiwe futhi benze izinqumo zokugwema i-malware namagciwane.
Ukuqhuba Idatha Yesikhashana Yedatha
Ukwenza ama-backups avamile kunoma yiluphi ulwazi kwikhompyutha kungalondoloza imibhalo uma ihlaselwa iTrojan. Abasebenzisi bangabuyisa amadokhumenti abhujiswe yi-malware namagciwane.